Fametrahana LibreOffice 3.6.4 amin'ny Debian Wheezy (Fitsapana ankehitriny) | Avy amin'ny Linux
Fametrahana LibreOffice 3.6.4 amin'ny Debian Wheezy (Fitsapana ankehitriny)
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Tsy ela akory izay ny 3.6.4 version de LibreOffice ary noho ny habetsaky ny vaovao ampidirin'ity kinova ity dia nanapa-kevitra ny hametraka izany amin'ny Debian Wheezy Eny, satria amin'ny dingana mangatsiaka dia hitako fa sarotra be ny fananantsika azy ato ho ato ao amin'ireo trano fitahirizan-tsika.
Alohan'ny hidiranao amin'ny antsipiriany momba ny fomba fametrahana LibreOffice 3.6.4, handinika ny sasany amin'ireo vaovao / fanatsarana izay izahay Office Suite:
Fanohanana ny mizana mizana sy bara data.
Manafatra avy amin'ny .xlsx ary manafatra / manondrana avy any / mankany .ods ao amin'ny ODF 1.2 (nitarina).
Kaonter-teny ao amin'ny tsipika fananganana.
Pejy master 10 vaovao vaovao
Fanondranana PDF miaraka amin'ny safidin'ny Watermark.
Manafatra sivana ho an'ny antontan-taratasy Corel Draw.
Fanohanana amin'ny fanafarana Office SmartArt
Anisan'ireo maro hafa izay hitantsika ao amin'ilay rohy napetrako teo aloha.
Raha nahatsikaritra zavatra ato amin'ity kinova ity aho dia haingana kokoa ny booty noho ny an'ny kinova teo aloha rehefa nosokafantsika LibreOffice fanindroany. Eny, andao hiroso amin'ny ampahany fametrahana.
Ampidiro ny LibreOffice 3.6.4
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fidirana amin'ny lojika ny pejy fisintomana an'ny LibreOffice ary tokony hahazo zavatra toy izao isika:
Araka ny hitanao amin'ny sary, ireo rakitra izay mivoaka amin'ny fisintomana dia misy ny binary ao .rpm, ary toy ny amin'ity tranga ity dia hapetrakay ao izy Debian, tsara tokony tsindrio ilay rohy milaza hoe Manova rafitra, kinova na fiteny.
Raha vao manindry isika, dia mahazo ity pejy manaraka ity, izay hisafidianantsika ilay kinova tiana sintomina.
Aorian'izay dia misafidy ny fiteny tiantsika alaina LibreOffice.
Avy eo isika dia misafidy ny maritrano izay te-hametraka arakaraka ny fitaovantsika. Raha manana fanampiana amin'ny 64 Bits isika dia misafidy x86_64, raha tsy izany, x86.
Ary voila, ny rohy mankany amin'ireo fisie izay misy ny mimari-droa amin'ny .deb dia tokony hiseho.
Raha vantany vao misintona ireo rakitra isika dia mila manala azy ireo. Ny ataoko dia izao manaraka izao, vantany vao mamoaka ny zotram-piainako rehetra aho, dia adikaiko daholo ireo .deb hitantsika amin'ireo zana-kazo samihafa ao anaty fampirimana tokana.
Mazava ho azy fa tsy maintsy esorintsika ny kinova LibreOffice teo aloha, satria na dia tsy misy fifanolanana aza izy ireo dia io no mety indrindra amin'ny fahasalamana amin'ity tranga ity. Noho izany dia mila apetratsika fotsiny $ sudo aptitude purge libreoffice libreoffice-common
Avy eo miditra amin'ilay folder aho amin'ny alàlan'ny terminal ary mila mametraka fotsiny aho:
Miandry izahay dia handeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fametrahana LibreOffice 3.6.4 amin'ny Debian Wheezy (Fitsapana ankehitriny)
Elav, nanontany tena foana aho hoe ahoana ny fomba famoahanao ny efijery amin'ny efijery iray manontolo nefa manome ho laharam-pahamehana amin'ny hazavana bebe kokoa amin'ny faritra manokana ianao: /
😀 Ataoko amin'ny Gimp izany. Avelao aho hijery raha manao tutorial kely momba ny fomba fanaovana an'io nefa tsy manasarotra ny fisiako hahaha. Zavatra tena mora atao izy io.
Tsara, antenaiko fa.
Efa an-dàlana 😉
Tsotra, mamorona sosona vaovao ianao, misafidy ny faritra tianao hasongadina, omeo ctrl + i hivadika ary fenoy mainty ny safidinao ary ampidino ny mangarahara mandra-pahazoanao ilay mifanohitra tadiavina.
Yup, fomba iray hafa hanaovana azy koa 😀 Misaotra anao nizara ny tendrony.
Heveriko fa manana izany safidy izany ny shutter.
Efa nanao an'ity fomba ity tamin'ny kinova 3.6.0 aho, ny zavatra ratsy dia rehefa manondro ny maimaim-poana fa misy fanavaozana ny freety, tsy maintsy averintsika ny fomba fiasa.
Rodrigo macedo dia hoy izy:
Fametrahana LibreOffice, tohizo miaraka amin'ny fijerin'ny KDE ihany, apetraho ny fonosana fampidirina kde-anatinyasis, azonao atao ve ny manampy ahy?
Mamaly an'i Rodrigo Macedo
Asongadino ny faritra misy ny sary amin'ny alàlan'ny Gimp